KL – Page 59 – Khit Lunge
မသန်မစွမ်းအဖိုးအို အမှိုက်ကောက်နေတဲ့နေရာမှာ အမှိုက်ပစ်ချသွားကြတဲ့ လမ်းသွားသူများ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဇန်ဘိုအန်ဂါ ပြည်နယ် ပါဂါဒီယန် မြို့ရှိ ဈေးတစ်ခုတွင် မသန်မစွမ်း အဖိုးအိုတစ်ယောက်က လမ်းပေါ်မှာ အမှိုက်ကောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံကို မြင်ကြတဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကတော့ မသန်မစွမ်းအမှိုက်ကောက်ခိုင်းတဲ့ ဈေးမြူနီစပယ် တာဝန်ရှိသူများကို အပြစ်တင်ခဲ့ကြသလို့ အဖိုးအို အမှိုက်ကောက်နေတုန်းမှာတောင် အမှိုက်များ လွှင့်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာများကို ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမှိုက်ကောက်နေတဲ့ အဖိုးအိုဓာတ်ပုံကို ရိုက်ကူးပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် အကူအညီတောင်းခဲ့သူတစ်ဦးကတော့ ” အဖိုးအိုက မသန်မစွမ်းဖြစ်ပြီး ဈေး…
ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီ ရလဒ်တွေဆိုးရွားလျက်ရှိနေတဲ့မန်ယူအသင်းဟာ တိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာ မာရှယ်၊ ရပ်ဖို့ဒ်နဲ့ ဒန်နီရယ်လ်ဂျိမ်းစ်တို့ကလွဲရင် ဆယ်ကျော်သက်တိုက်စစ်မှူးလေးဂရင်းဝုဒ်သာရှိနေပြီး ကျန်ကစားသမားတွေက ခြေမမှန်ပါဘူး။ ဒီလိုအနေအထားမှာ လူကာကူနဲ့အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ်ကို အသင်းပြောင်းခွင့်ပေးပြီး ကစားသမားသစ်ထပ်မခေါ်ခဲ့တာဟာ အမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ တချို့က ဝေဖန်ထောက်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူနည်းပြဆိုးလ်ရှားဟာ လူကာကူထက် မားကပ်စ်ရပ်ဖို့ဒ်ကို ပိုမိုသဘောကျသူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီ အသင်းရဲ့တိုက်စစ်အခြေအနေဆိုးရွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆိုးလ်ရှားနဲ့ရပ်ဖို့ဒ်ကို ဝေဖန်နေကြတာတွေရှိပေမယ့်လည်း ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေအရ မားကပ်စ်ရပ်ဖို့ဒ်ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းက အပြစ်ပြောစရာသိပ်မရှိတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာ လူကာကူက အင်တာမီလန်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြကစားလျက်ရှိနေပြီး…
မယုံနိုင်ဖွယ်စံချိန်တင်ခဲ့ပြီးနောက် ဂိုးသွင်းစွဲနေပြီဆိုတာ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ လီဝန်ဒေါစကီး
ဇဗက်ဒါကို ဂိုးဒါဇင်ဝက်နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာ အသင်းတိုက်စစ်ကို အကောင်းဆုံးဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တိုက်စစ်မှုးလီဝန်ဒေါစကီးက သူဟာ ဂိုးသွင်းရတာကို စွဲလန်းနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ ၃၁ နှစ်အရွယ် အဲဒီပိုလန်ကြယ်ပွင့်ဟာ ဒုတိယပိုင်းပြန်စပြီးတဲ့နောက် ၁၄ မိနစ်တာကာလအတွင်းမှာပဲ ဘိုင်ယန်အတွက် ၄ ဂိုးဆက်တိုက်သွင်းပေးခဲ့ပြီး သူ့ကြောင့်သာ ဘိုင်ယန်ဟာ ပထမပိုင်း ၁ ဂိုးသာပြတ်နေရာကနေ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း လီဝန်ဒေါစကီးဟာ ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းမှာ ၄ ဂိုးဆက်တိုက် အမြန်ဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားအဖြစ်…
စီရော်နယ်ဒိုဟာ မနေ့ညက အက်သလက်တီကိုကို ၁-၀ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ ဂျူဗင်တပ်အတွက် ပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပွဲမှာ သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းထက် သူ့ရဲ့ဆံပင်ပုံစံကသာ ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံစိုက်စရာ ဖြစ်သွားပါတယ်။ စီရော်နယ်ဒိုဟာ ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် အတ္တလန္တာနဲ့ပွဲကို လွဲချော်ခဲ့ရပေမယ့် အက်သလက်တီကိုနဲ့ပွဲမှာ ပြန်ပါလာသလို အရင်နှစ်ပွဲကလို လူစားလဲမခံရတော့ဘဲ ပွဲချိန်ပြည့်ကစားသွားခဲ့တာပါ။ ပွဲအတွက် အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်စေမယ့် တစ်လုံးတည်းသောဂိုးကိုလည်း ဒိုင်ဘာလာက သွင်းခဲ့တာဖြစ်လို့ ခြေစွမ်းအရ စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ပွဲတော့ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့…
Posted on November 26, 2019 November 26, 2019 by KL
ဖိအားဆိုတာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း အရင်က ဒါမျိုးတစ်မှမကြုံဖူးရလောက်အောင် ကာလတစ်ခုတည်းမှာပဲ ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်တဲ့နည်းပြအရေအတွက် တစ်ယောက်၊နှစ်ယောက်တည်းမကဖြစ်နေပါတယ်။ ဆိုရရင် လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကြိုးတန်းပေါ်လျှောက်နေရတဲ့နည်းပြတွေ တန်းစီလို့နေပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာကို ခရစ္စမတ်မတိုင်ခင် ထုတ်ပယ်ခံရဖို့ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတာ ၃ ယောက်တောင် ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ပထမရေပန်းအစားဆုံးကတော့ အဲဗာတန်နည်းပြမာကိုဆေးလ်ဗားပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က အိမ်ကွင်းမှာတင် တန်းဆင်းဇုန်ထဲက နော်ဝစ်ခ်ျကိုရှုံးသွားလို့ အဲဗာတန်ဟာ တန်းဆင်းဇုန်နဲ့ ၄ မှတ်သာကွာတော့ကာ ဒါကြောင့်လည်း…
ယခုတစ်လောနာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာသြဘာ ရဲ့ ကြော်ငြာဟာ Copy ဆိုပြီးဖွင့်ချခံရ
ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ မကြာသေးခင်က မြန်မာသြဘာ ရဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုဟာ ပရိသတ်တွေကို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် ။ အခုလို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်အောင် ရွှေအိမ်စည် ၊ သင်ဇာဝင့်ကျော် ၊ လုလုအောင်တို့ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ပြခဲ့ကြတာပါ ။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ အဆိုပါကြော်ငြာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာကြော်ငြာကြီးဖြစ်လို့နေတာပါပဲ ။ အခုလို အိုင်ဒီယာကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကြော်ငြာဟာ ကော်ပီကြီး ဖြစ်နေတာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာ ပါ…
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးသေဆုံးမူနှင့် ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးအားယနေ့စစ်ဆေး
၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ်( မြောက်ပိုင်း )တန့်ယန်းမြို့သို့ ဘုန်ကြီး တစ်ပါးနှင့်အတူ မော်တော် ယာဉ်ဖြင့် အတူခရီးသွားခဲ့သည့် အမျိုးသား တစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို နိုဝင်ဘာ (၂၅)ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက တန့်ယန်းမြို့မရဲတပ်ဖွဲ့က လွှဲပြောင်းရယူထားပြီး ခရီး အတူသွား ခဲ့သည့် ဘုန်းကြီးအား ထိန်းသိမ်းထားကာ စစ်ဆေး မှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါသေဆုံး သူမှာ ကိုခိုင်ဇော်ဝင်း(ခ)ကိုနေရှိုင်း ဆိုသူဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်ကာ…
အမေရော အဖေရော အဖွား ပါ သေဆုံးသွားလို့တစ်ယောက်ထဲ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ၁၀ နှစ်ကလေး
ဘဝမှာ ဆွေမျိုးမိဘမရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်ဖို့ ဆိုတာ တကယ်တော့မလွယ်ပါဘူး…..ဒါပေမဲ့ ခုပြောပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးထဲက အသက် ၁၀ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်ဟာ တစ်ယောက်တည်းဘဝကို ရပ်တည်ဖြတ်သန်းနေရတာပါ….ငယ်စဉ်ကတည်းက အမေဖြစ်သူက ဆုံးပါးသွားတာဖြစ်ပြီး အဖေကလည်း ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတစ်ယောက်အဖြစ် အဝေးမှာ အလုပ်လုပ်နေရသူပါ….. ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘနဲ့ခွဲနေရတဲ့ Dang Van Khuyen လေးဟာ ဖခင်ဖြစ်သူအလုပ်လုပ်ပြီး ပို့ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အဘွားဖြစ်သူနဲ့အတူ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရရှာတာပါ… ဒါပေမဲ့ ခုချိန်မှာတော့…
ရွှံ့တောထဲမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သူ
စိုင်းလူခေး ဆိုတဲ့ ပရဟိတ လူငယ်လေးဟာ ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့က ခက်ခဲတဲ့ ရွာတွေကို သွားရောက် ကူညီရင်း လမ်းဘေးမှာ စက်ဘီးအပျက်တစ်စီးနဲ့ ကလေးလေးကို တွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်. …. အဲဒီကလေးကို တွေ့တာနဲ့ သူက စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ခုလို Post တင်ခဲ့ပါတယ် “ဒီကလေးရဲ့ အိပ်မက်က စက်ဘီး တစ်စီး ပိုင်ချင်တယ် တဲ့. . ညီလေးရဲ့….
လူဦးရေ ၆ သန်းကျော်သာရှိပြီး မြေပြန့်နည်းပါး တောင်တွေပေါတဲ့ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံငယ်လေးဟာ အမြန်ဆုံး တိုးတက်လာတာ အံ့မခန်းပါပဲ။ နောက်ဆုံး ကျန်ရှိနေတဲ့ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံငယ်လေး တစ်ခုပေမယ့် အဓိက အားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံခြား export၊ ဘီလီယံချီတန်တဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦးတွေဖြစ်တဲ့ ကျည်ဆံရထားလမ်းနဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးများ၊ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများကြောင့် ထူခြား ပြောင်မြောက်တဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘီလီယံချီ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို တရုတ်၊ ထိုင်းနဲ့…